टेक्सासको नेपाली मन्दिरले विवाहका लागि जोडी मिलाइदिने, यसरी दिनुहोस् अनलाइन आवेदन « Khasokhas Follow @khasokhasmag
टेक्सास ड्यालसको नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र (एनसिएससी) ले बरबधु मिलन कार्यक्रम थालनी गरेको छ । नेपाली मन्दिरका नामले परिचित एनसिएससीले एक वर्षसम्मको गृहकार्य एवं कानुनी तथा व्यबहारिक पक्षको अनुसन्धान पछि यो कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ ।
‘यो कार्यक्रमबाट बरले उपयुक्त बधु र बधुले आपूmले खोजेको जस्तो वर पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ’ कार्यक्रमकी वेवसाइट निर्देशक डा. विष्णुमायाँ उपाध्यायले भनिन् । अमेरिकामा सम्पर्क तथा पहुँचको अभावले अध्ययन सकेर, राम्रो काम गरेर विवाहयोग्य उमेर पुगेका थुप्रै नेपालीहरु छन् । तिनलाई एउटै वेवसाइट मार्फत सम्पर्कमा जोड्ने पुलको काम मन्दिरले गर्न लागेको हो ।
आवेदन दिन चाहनेले यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
आवेदन शुल्क ९९ डलर शुल्क राखिएको छ । निशुल्क गर्दा जथाभावी दर्ता हुने संभावना देखिएपछि शुल्क राखिएको जनाइएको छ । केही समयका लागि शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
बरबधुको लागि भनेर भरिएका व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षा लगायतका कानुनी प्रकृयाका बारेमा मन्दिरले निकै लामो अध्ययन गरेको दावी गरेको छ । यही क्षेत्रमा लागेका अमेरिकी कानुनका ज्ञाताहरु समेतको परामर्शमा वेवसाइटको डिजाइन गरिएको र यो कार्यका लागि मन्दिरले झण्डै एक वर्ष समय खर्चिएको संयोजक डा. अधिकारीले उल्लेख गरे ।
बरबधुको खोजीमा वेवसाइटमा प्रकाशित विवरण यस्तो रूपमा प्रकाशित हुनेछ ।